KHILAAFKA MUSHAHARKA SHIRKADAHA BATROOLKA PUNTLAND
Khilaafka Soo kala Dhex Galay Gen. Cadde, Liibaan, Aloore iyo Shirkadda IMC
iyo Khilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee shirkadda Range Resources dhexdooda...
SomaliTalk.com | Axad, July 6, 2008
Jariidadda The West Australian ayaa sheegtay in khilaaf u dhexeeyo agaasimaha shirkadda Range, Peter Landau iyo maareeyaha guud ee Range Resources, Michael Povey, oo la xiriira Leo Khouri.
Gen. Cadde Muuse oo Boosaaso degdeg u tegey, Degdegna uga soo laabtay....
Khilaaf xooggan oo la xiriira shidaal baarista Puntland ayaa beryahan ka socdey Maamul Goboleedka Puntland. Murankaas oo la xiriira cidda maamuleysa hawlaha sahaminta batroolka ee laga wado Dooxada Dharoor.
Arrintani waxa ay si weyn u soo shaac baxday kaddib markii shirkadda sahaminta ka wadda Dharoor ee IMC ay ogaatey in mushaharka shaqaaluha aanu sidii loogu talo galay u gaarin, oo aysan helin boqolkiiba 50% ama la qorshaynayo in la dhimo. Arrintaas ayaa shacabka iyo shaqaalaha reer Puntland ku eedaynayaan Liibaan Boqor oo wakiil u ah shirkadda Range Resources.
Shaqaalaha guud ee u shaqeeya shirkadda IMC waxaa lagu qiyaasay:
150 Askari oo ilaaliya shirkadda, (50 ka mid ah ayaa si gaar ah u tababaran), iyo
ilaa 60 dareewal oo is bedbedel.
Mushaharka ay shirkaddu ugu talo gashay waa:
$500/bishiiba - Askarta Gaarka u tababaran mid kasta (waa 50 asakari)
$300/bishiiba - Askarta caadiga ah mid kasta (waa 100 askari).
$400/bishiiba - Dareewallada mid kasta (waa ilaa 60 dareewal).
Shirkadda IMC markii ay ka war heshay in shaqaalaha lacagtooda kala bar laga jaro ama laga jarayo, ayey la hadashay Liibaan Boqor. Waxana uu markaas shirkadda kula taliyey in:
50% (kala bar) laga jaro/la rabo in laga jaro oo Dareelada markaas la siiyo midkiiba $200
50% (kala bar) laga jaro/la rabo in laga jaro oo askarta caadiga ah markaas la siiyo midkiiba $150
Shirkadda IMC arrintaas wey ku gacan sayrtay. Si qayaxan ayeyna warkaas uga diidey arinkaa. Lama oga in arrinkan Liibaan Muuse sameeyey uu yahay mid ay shirkadda Range Resourses la qabto iyo in arrinku yahay mid isaga u gaar ah, ayey isweydiinayaan shacabka reer Puntland. Arrinku sida uu doono ha noqdee, waxay shirkadda IMC tiri hadda laga bilaabo annaga ayaa toos u maamuleyna hawlaha shaqaalaha, taas oo Liibaan ku gacan sayray.
Waxaa wararku tibaaxeen in IMC ay Liibaan Muuse u sheegtay in uu isagu u shaqeeyo Range Resources, balse iyagu ay u shaqeeyaan shirkadda Africa Oil oo hawsha iyaga u xil saartay, sidaas daraadeedna uusan isagu hawlahoodu kusoo faragelin karin.
Waxaa kale oo soo shaac baxday in Wasiirka Tamarta iyo Macadanta DGPL uu isna doonayey in hawlaha shidaalka si toos ah isaga loogu soo wareejiyo, oo laga joojiyo Liibaan Muuse oo isaga loo arko in uu noqday qofka go'aanka ka gaaraya dadka la qorayo shaqada, cidda ay noqonayaan iyo weliba cidda lagala hadlayo arrimaha aagga wax laga baarayo. Taasi Wasiirka Macdanta aad ayey uga caraysiisay.
Dad aad ugu dhow dhow wasiirka Macdanta ayaa noo xaqiijiyey in Wasiirku uu dhowr jeer Jeneraal Cadde iyo Liiban ka codsaday in arrimaha socda lagu wareejiyo Wasaaradiisa. Laakiin Liibaan iyo Cadde waa ay ka biyo diideen, waxaana ay mar walba u sheegayeen in arrinka Libaan loo daayo.
Arrimahaas oo jira ayaa Madaxweynaha Maamul Goboleedka Puntland, Maxamuud Muuse Xirsi (Gen. Cadde Muuse) wuxuu dhex dhexaadin ahaan arrimaha aagga Dharoor ugu diray Wasiirka Tamarta iyo Macadanta DGPL, Xasan Cismaan Maxamuud (Aloore) maalintii Arbacada July 2, 2008.
Wasiirka Macdanta qorshihiisu wuxuu uu ahaa in wasaaraddiisu ay noqoto tan u dhaxayneysa IMC iyo shaqaalaha, uuna dhex dhexaadiyo Liibaan iyo shirkadda. Laakiin arrimihii uu ergada u ahaa waa u suurta geliwayeen.
Shirkadda IMC waxay ku adkaysatay in aysan u baahnayn cid dambe oo u dhaxaysa iyaga iyo shaqaalaha iyo weliba shacabka deggan aagga ay ka shaqaynayaan. Sida oo kale waxaa ay ku soo cel celisey sababta keentay in dawladdu ay arrinkan gacanta ugu qaban weydey, waxayna shirkaddu farta ku fiiqday in Liibaan Muuse uu baalmarayo Wasiirka iyo Dawaladda.
Halkaas waxaa ka soo baxday in arrinta uusan wasiirkii macdantu waxba ka qaban karin. Qof aad loogu kalsoon yahay oo madaxweynaha ku dhowna wuxuu noo sheegay in arrinku isugu soo biyo shubtay in Madaxweynaha arrinka uu faraha la soo galo oo dhex dhexaadin toosa sameeyo.
Gen. Cadde Muuse markii uu ogaadey wasiirkii uu hawsha u xil saaray in uusan xallin karayn, ayuu si deg deg ah uga ambabaxay magaalada Garoowe oo uu ka socdo Kalfadhigii 20aad ee Golaha Baarlamaanka Puntland, iyo shirar kale oo muhiim ah.
Intii uusan ka ambabaxin Garoowe, Gen. Cadde Muuse waxa uu Arbaca July 2, 2008 shir degdeg ah Golahiisa Wasiirada ugu qabtay xarunta madaxtooyada Garoowe. Waxaana kulankaas ay Golaha Xukuumadda DGPL ku ansixiyeen Dastuurka Cusub ee Qabyada ah. Dastuurkaas oo ay ku jiraan qodobbo si gaar ah u khuseeya Macdan iyo Batrool Puntland.
Waxa uu Gen. Cadde shirka degdeg ahaa ee uu u qabtay Golahiisa Xukuumadda ka sheegay in 'Dastuurka' loo gudbinayo Golaha Wakiilada (Baarlamaanka). Waxaa shirkaas la soo hor mariyey hal maalin, waxaana sababta soo hor marinta sharraxaad kooban ka bixiyey xafiiska wararka u faafiya madaxtooyada DGPL oo sheegay "Kulan(ka) ayaa waxa uu ahaa kulankii khamiislaha ahaa oo laga soo hor mariyey xalay, ka dib markii uu madaxweynuhu ay soo gashay safar Boosaaso ah." Sidaas ayuuna degdeg ugu ambabaxay Boosaaso.
Madaxweynaha DGPL markii uu tegey Boosaaso waxa uu bilaabay in uu u kala dab qaado Liibaan Muuse Boqor, Wasiirka Xasan Cismaan Maxamuud iyo hawl wadeennada shirkadda IMC. Waxaana wararku tibaaxeen in uu Khamiis July 3, 2008 la kulmay shirkada IMC. Sidaas oo kale wuxuu Jimcihii (July 4, 2008) la kulmay Liibaan Muuse, in kasta oo aysan caddayn waxa ay ka wada hadleen natiijadeeda iyo sida arrinta xalkeeda ay isula meel dhigeen.
Kaddib, Gen. Cadde Muuse si degdeg ayuu uga soo laabtay Boosaaso isagoo ku soo noqday Garoowe. Waxana uu Sabtidii July 5, 2008 ka qayb galay shir ka dhacay Jaamacadda PSU ee ku taal Garoowe, oo dhex maray madaxda maamulka Puntland iyo Xubno wakiillo u ah hey'addaha Samafalka ee Qaramada Midoobay (UN). Kulankaas oo Gen. Cadde si kulul uga cambaareeyey hay'adaha Samafalka.
Safarka degdega ahaa ee Gen. Cadde Muuse ku tegey Boosaaso, lama oga in qorshihiisii uu u soo hirgalay, mana jiro war sugan oo DGPL ay arrimaha safarkaas ka soo saartay.
Dhanka kale waxaa soo if baxaya in beelaha deggan aagga Ufayn iyo guud ahaan Uur-Caleed aysan ku qanacsanayn qaabka loo maalulay hawl galka shirkadda sahamintu ay ka waddo aaggaas oo ay ka dhigatay xarun tooda.
Arrintaas ifafaalaheeda ugu horeeyey waxa uu soo shaac baxay June 1, 2008 mar uu madaxweynaha DGPL booqday kaamka ay shirkadda IMC ka dhigatay aagga Ufayn, markaas ayaa Guddomiyaha Degmada Ufayn, Cabdullaahi Shire Maxamed, isagoo ka hadlaayey cidda xaqa u leh in ay qorto shaqaalaha shirkadda u shaqaynaya waxa uu goobtii uu Gen. Cadde Muuse fadhiyey ka yiri: "waxaa jira 32 qof oo gole degaan ah oo xaq u leh inay shaqeeyaan, shaqaalaha qoraan, laga amar qaato, degmada looga dambeeyo, xil loo saaray, qabiiladu u dhiibeen, isimadu firmeeyeen (saxiixeen), sidaa loo sameeyey, ayagii ayaa marka xaq u leh in ay qabtaan wixii degaanka laga qabanayo, haddana waxaan leenahay waa in iyaga laga amar qaato.. waa sheegnay, qabiilku waa qabiil guud, madaxweynuhu waa madaxweyne guud, waxay shaqadu imaaneysaa cidda masuulka ka ah degaanka, taas madaxweyne waxaan dooneynaa in laga amar qaado culaysna la saaro..."
Dhanka kale waxaana la ogyahay in Beeldaajaha beelaha deggan aagga Ufayn, Beeldaaje Cali Faarax, ahna isim qadarin iyo magac weyn ku leh Gobolka Bari iyo guud ahaan Puntland, uu ka mid ahaa isimada Puntland ee Baaq ka soo saaray Garoowe, Isniin June 30, 2008. Baaqaas Isimada oo ku taliyey in Puntland loo qabto "shirweyne Qaran" si loo badbaadiyo. Qodobada ay sida gaarka ah u tilmaameen waxaa ka mid ah "Dastuurkan qabyada ah" ee loo samayanayo Puntland oo ay ku sheegeen in ay "ku jiraan qodobo aan u cuntami karin reer Puntland".
Baaqa isimada waxaa si kulul uga jawaabey wasiirka Wasiirka Warfaafinta Isgaarsiin, Dhaqanka & Dalxiiska DGPL C/raxmaan Max�ed Saalax (Bankax), oo warsaxaafadeed uu soo saaray July 2, 2008 ku sheegay "In aanay jirin go�aanno uga yimid Isimada Puntland," isagoo intaas ku daray "Waxaa dastuurka dalka u yaal dhinac marsan in gobollada lagu khaldo isugu yeeris ergooyin uusan dalbim maamulku."
"Shan Bilood ayaan ku soo saareynaa Batroolkeena..." Gen. Cadde Muuse -
Gen. Cadde Muuse ilaa markii la doortay waqtigiisa ugu badan waxa uu ku bixiyey arrimaah la xiriira Macdanta iyo Batroolka. Waxana uu June 15, 2008 sheegay in ay Batroolka Puntland kusoo saarayaan ilaa 5 bilood [oo ku beegan November 15, 2008] - Inkasta oo aan weli wax hawl qoditaan ah laga bilaabin aagga Dooxada Nugaal, gaar ahaan ceelkii aagga CONOCO oo ah meesha loogu tuhunka badan yahay in batrool ku jiro.
Shirkadaha ku xiriirsan Puntland
Shirkadda IMC waxay sahamin ka wadaa Dooxada Dharoor, gaar ahaan baaritaanka nooca loo yaqaan "seismic' oo ah bilowga hore ee lagu ogaado in shidaal ku jiro ubucda dhulka hoostiisa.
Shirkadda IMC waa shirkad laga leeyahay dalka UK, waxayna qandaraas ka haysataa shirkadda kale ee Africa Oil (Ex-CANMEX) oo ah shirkad laga leeyahay dalka Sweden, laakiin ka diiwaan gashan dalka Canada.
Shirkadda Africa Oil waxay heshiis ku saabsan baaritaanka shidaalka ee Dooxada Dharoor iyo Nugaal la gashay shirkadda reer Australia ee Range Resources.
Shirkadda Range Resources waxay xuquuqda shidaal iyo macdan qodista dhulka Puntland ka iibsatey shirkadda ka diiwaan gashan jasiirada Maldives ee CONSORT ltd. Laakiin shirkadda Consort ltd waxay weli saami gaaraya 15% ku leedahay Range Resources. Waxaana warbixino hore tibaaxeen in shirkadda Consort ay wax ku leeyihiin ama ku lug leeyihiin qaar ka mid ah madaxda sare ee maamulka Puntland, arrintaas oo ilaa hadda aysan si qayaxan uga hadlin maamulka DGPL.
Shirkadda Consort ltd waxaa saxiixa baaritaanka macdanta/batrool ee Puntland siiyey Gen. Cadde Muuse, kaddib markii uu kulan dhex maray Jeneraalka iyo nin reer Australia oo lagu magacaabo Terry Donnelly oo ka socdey hay'ad samafal carruurta "Kids in Needs", ninkaas oo loo aaneeyo fikirka asaaska shirkadda Consort, in kasta oo aan dib dambe warkiisa loo maqal.
Gen. Cadde Muuse waxa uu marar badan sheegay in uu heshiis la gelayo shirkado jirri ah. Waxaa ugu dambeysey June 15, 2008 oo uu yiri "Jirri ayaa tiriye Shaydaan baan la heshiinayaa si aan waddan kayga wax ugu soo saaro".
Khilaafka Shirkadda Range Resources Dhexdeeda
Akhri [Khilaafka oo kala dhex galay madaxda Range iyo Guriga Xafiiska u ah Rang eoo beec ah...]
Akhri qisadii Batroolka dalka Mauritania iyo shirka reer Australia ee Woodside drill deep into an African money pit - The Age, Australia, July 5, 2008